Maitiro Ekugadzirisa Eko Kunyora Kwekutsvaga Injini mu2014 | Martech Zone
Maitiro Ekugadzirisa Eko Kunyora Kwekutsvaga Injini mu2014
Svondo, Gunyana 7, 2014 Svondo, Gunyana 7, 2014 Douglas Karr
Tichine zvikamu zvekudzidzisa nevatengi vedu kujekesa yakawanda mibvunzo maererano nemajini ekutsvaga uye maitiro ekunyora kuti uvandudze kuoneka kwako. Zvakajeka uye zvakapusa haunyorere zvekutsvaga, iwe unonyorera vanhu. Ini ndinotenda maGoogle algorithms apedzisira afambira mberi kuziva vanyori nemasimba, kugovana uye mukurumbira, zvinyorwa zvekusiyanisa, uye zvemukati zvekupa chinangwa cheuyo anotsvaga.
Kuteedzera ndechimwe chezvinhu zvakakosha zveeseti yekutsvaga Injini Kugonesa. Asi neGoogle inogara ichisundira nyowani algorithm yekuvandudza uye nekuchinja iyo mitemo yemutambo, zvakanyatso kuoma kuteedzera izvo zvinoshanda. Zvakare, zvakaoma kuti uzive kana kuedza kwako kwekugadzirisa kuri kuita zvinokuvadza kupfuura zvakanaka kune ako masosi. Heano gumi nematatu matipi ayo achakubatsira iwe kunyora zvemukati zvinosvika muna 13. Michael Aagard, YemukatiVerve
Muna 2014, iyo infographic inonyatso tarisa pane chaicho chiitiko chemuverengi. Ini handitendeke chokwadi ichi SEO Kuteedzera, Ndinogona kutaura kuti iwo matipi ari nyore copywriting matipi. Kubva pane maonero eSEO, kuchine mukana wekuti uve nechokwadi chekuti zvemukati zvakanaka zvinoratidzwa zvakanaka pane yako saiti, hazvo. Kumanikidza mazita, akanangana nezvinyorwa, saiti uye yekufambisa hierarchy, yekuona midhiya, kupindura nhare ... zvese izvo zvinhu zvinofanirwa kuve zvakarukwa neyako yemukati zano kuti uve nechokwadi chinotyisa mushandisi ruzivo. Kana izvozvo zvikaitika, great search engine rankings ichatevera!
Tags: 2014 SEOzvideocopywritingmaitiro ekunyoraMichael Aagardiko kunyoraseo copywriting matipikunyora kopi yekutsvaga
Ichi Chimwe Chinhu Chekutengesa Chingave chiri Kurasikirwa Kambani Yako $ 4 Mamiriyoni Pagore
Mari Yakachipa muRedhiyo ichawedzera Vhidhiyo Kubatanidzwa